Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha hiitarka aluminium-silikoon Jeesjees
Daawaha aluminium-silicon-sare waa daawaha binary ka kooban silicon iyo aluminium, waana maare kuleyl ku-saleysan biraha. Alaabada aluminium-silicon-ka sare leh waxay ilaalin kartaa sifooyinka aadka u fiican ee silikon iyo aluminium, ma wasakhayso bay'ada, oo waxyeello uma leh jidhka bini'aadamka. Cufnaanta dhagaxa aluminium-silikon-ka sare wuxuu u dhexeeyaa 2.4 ~ 2.7 g/cm³, iyo isugeynta ballaarinta kuleylka (CTE) wuxuu u dhexeeyaa 7-20ppm/℃. Kordhinta maadada silikoonku waxay si weyn u yareyn kartaa cufnaanta iyo isbarbardhigga ballaarinta kuleylka ee walxaha daawaha ah. Isla mar ahaantaana, daawaha aluminium-silicon-sare sidoo kale wuxuu leeyahay tabinta kuleylka oo wanaagsan, adayg gaar ah oo sare iyo adayg, waxqabadka dahaadhka wanaagsan ee dahabka, qalinka, naxaasta, iyo nikkel, lagu dhejin karo substrate-ka, iyo farsamaynta saxda ah ee fudud. Waa alaab baakadeysan oo elektiroonig ah oo leh rajooyin codsi oo ballaaran.
Hababka wax-soo-saarka ee walxaha isku-darka ah ee aluminium-silikon-ka-sarreeya waxay inta badan ka mid yihiin kuwa soo socda: 1) dhalaalid iyo shubid; 2) habka dhexgalka; 3) macdanta budada; 4) habka cadaadiska kulul ee vacuum; 5) habka qaboojinta/buufinta degdegga ah
1) Habka dhalaalka iyo shubka
Qalabka loogu talagalay dhalaaleynta iyo shubka ayaa ah mid fudud, qiimo jaban, wuxuuna xaqiijin karaa wax-soo-saarka warshadaha ee baaxadda leh, waana habka ugu ballaadhan ee loogu diyaargaroobo alaabta daawaha ah.
2) Habka impregnation
Habka uur -ku -dhalaaliddu waxay ka kooban tahay laba hab: habka dhexgalka cadaadiska iyo habka dhexgalka ee aan cadaadiska lahayn. Habka dhexgalka cadaadiska wuxuu adeegsadaa cadaadis farsamo ama cadaadis gaas oo la cadaadiyey si birta salka u dhalaalaysa u dhex gasho farqiga xoojinta.
3) Macdanta budada
Metallurgy budada ah waa in lagu kala firdhiyo qayb ka mid ah budada aluminium, budada silikooniga iyo isku xidhka si isku mid ah, isku qas oo u qaabee boodhka adigoo riixaya qalajinta, duritaanka iyo habab kale, ugu dambayntiina ku jajaban jawi ilaalin si ay u sameeyaan wax cufan.
4) Habka cadaadiska kulul ee Vacuum
Habka cadaadiska kulul ee faakuumku wuxuu loola jeedaa geeddi -socod sintering ah kaas oo samaynta cadaadiska samaynta iyo cadaadinta isku -darka isku mar la fuliyo. Faa'iidooyinkiisu waa: powderBudhuhu way fududahay in caaggu qulqulo oo la cufto; TemperatureCimilada qallafsan iyo wakhtiga qallafintu waa gaaban yihiin; Cufnaanta ayaa sarreysa. Geedi socodka guud waa: marka la eego xaaladaha faaruqinta, budada waxaa la geliyaa godka caaryada, budada waa la kululeeyaa inta la cadaadinayo, iyo wax isku dhafan oo lebis ah ayaa la sameeyay kadib waqti gaaban oo cadaadis ah.
5) Qaboojin/buufin degdeg ah
Teknolojiyad dhigidda qaboojinta/buufinta degdegga ah waa teknolojiyad adkayn degdeg ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda: 1) ma jiro kala-soocid macro; 2) microstructure crystal ah oo siman oo lebis ah; 3) marxalad roobab hoose oo wanaagsan; 4) maadada ogsajiinta oo yar; 5) wanaajinta waxqabadka kaamerada.
(1) Hypoeutectic silicon aluminium aluminium waxaa ku jira 9% -12% silicon.
(2) Daawaha aluminium silicon Eutectic waxaa ku jira 11% ilaa 13% silicon.
(3) Macdanta Silicon ee daawaha aluminium -hypereutectic waxay ka sarreysaa 12%, badiyaa inta u dhaxaysa 15%ilaa 20%.
(4) Kuwa leh silicon ka kooban 22% ama ka badan waxaa la yiraahdaa aluminium aluminium-silicon sare, kuwaas oo 25% -70% ay yihiin kuwa ugu waaweyn, iyo maaddada silicon ee ugu sarreysa adduunka ayaa gaari karta 80%.
1) Baakadaha wareegga ee isku-dhafan ee awoodda sare leh: Daawaha aluminium-silicon-sare wuxuu bixiyaa kala-firdhinta kuleylka;
2) Carrier: Waxaa loo isticmaali karaa sidii kuleyliyaha kuleylka maxalliga ah si loogu sameeyo qaybaha si aad isugu dhow;
3) Qaabka indhaha: Aluminium aluminium silicon sare wuxuu bixiyaa isku -dheereynta ballaarinta kuleylka, adkeynta sare iyo shaqeynta;
4) Kuleylka kuleylka: Daawaha aluminium ee silikoon sare wuxuu bixiyaa kuleylka wax ku oolka ah iyo taageerada dhismaha.
5) Qaybaha Gawaarida: Qalabka aluminium-silicon sare leh (alaabada silikon 20%-35%) waxay leedahay astaamo saddex-geesood ah oo aad u fiican, waxaana loo adeegsan karaa sidii qalab horumarsan oo u adkaysta khafiifka ah oo loo adeegsado aaladaha gaadiidka ee kala duwan, mashiinnada awoodda kala duwan, iyo mashiinka qalab. , Qalabka wax lagu xiro iyo qalabka gaarka ah ayaa si weyn loo isticmaalay.
Daawaha aluminium-silikoon sare wuxuu leeyahay faa'iidooyin taxane ah sida culeys yar oo gaar ah, culeys khafiif ah, tabin kuleyl wanaagsan, isugeyn ballaarinta kuleylka oo hooseeya, xasilloonida mugga, iska caabin wanaagsan, iyo iska caabinta daxalka wanaagsan, waxaana si weyn loogu adeegsadaa silsiladaha silsiladda, pistons, iyo rotorada matoorada baabuurta. , Biriigyada Biriiga iyo agabyo kale.
Hore: Tuur birta giraanta caagga ah si wadajir ah loo xoojiyay sariirta caag ah oo la taaban karo
Xiga: jirka dubbe for burburiyaha macdanta
Tuur Aluminum Silicon Radiator shubay